सुशान्त राजपुतको नाममा अन्तरिक्षमा पनि जग्गा !::Best Online News Portal of Nepal
सुशान्त राजपुतको नाममा अन्तरिक्षमा पनि जग्गा !
बिहिबार, असार ४ २०७७
काठमाडौं। मुम्बईको बान्द्रास्थित आफ्नै निवासमा आत्महत्या गरेका अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको थुप्रै मंहगा कार र मोटर साइकल लगायत चन्द्रमामा पनि आफ्नै जग्गा रहेको खुलेको छ । ५९ करोड भारु बराबरको सम्पत्तिका मालिक अन्तरिक्ष प्रेमी थिए ।
उनी अधिकांश समय सूर्य ,चन्द्रमामा, नक्षत्र ग्रह जस्ता ब्रम्हान्डिय वस्तुहरुबारे कुरा गरिरहन्थे । घन्टौ आकास नियाल्ने बानी भएका उनीसंग निकै महंगो टेलिस्कोप पनि छ । शनि ग्रहको चक्का हेर्न उनले त्यो निकै महंगो टेलिस्कोप किनेका थिए ।
भगवान शिवजीका अनन्य भक्त उनी प्रायश ओमको ब्रम्हान्डिय महत्वबारे सामाजिक संजालमा सामग्रीहरु पोस्ट गरिरहन्थे । मोटर साइकल भनेपछि हुरुक्कै हुने उनीसंग स्टाइलिस बिएमडब्ल्यु के १३०० आर मोटरसाइकल लक्जरी स्पोर्टस कार मासेरटी क्वात्रोपोर्ते र ल्यान्ड रोभर रेन्ज रोभर सभ पनि छ ।
चन्द्रमामा आफ्नो जग्गा हुने एक मात्र अर्को वलिवुड कलाकार शाहरुख खान हुन् उनलाई एकजना फ्यानले सो जग्गा किनिदिएका थिए ।
दुर्लभ गुलाबी हीरा जसको मुल्य २ अर्ब भन्दा बढी
प्रयोग भइसकेका तीन लाखभन्दा बढी कन्डम बिक्रीमा राखिएपछि बरामद
पतिले पेट चिरेर गर्भवती महिलाले जन्माइन् मृत शिशु
छोटो र उत्तेजक कपडा लगाउन नपाउने भएपछि मोडलहरुको बिरोध